PHILA NJENGENDAWO! Ikotishi elingasemanzini, hamba uye edolobheni - I-Airbnb
PHILA NJENGENDAWO! Ikotishi elingasemanzini, hamba uye edolobheni
Kinsale, County Cork, i-Ireland
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Con And Mary Ann
U-Con And Mary Ann Ungumbungazi ovelele
PHILA NJENGENDAWENI E-#1 LOBSTER futhi ujabulele...
• I-waterside, ikotishi elilungiswe ngokuphelele eliziqhayisa ngengaphandle lendabuko kanye nengaphakathi elithuthukisiwe, lesimanjemanje elinokubukwa kwefasitela ngalinye!
• Ithala elinefenisha, langasese elinokubukwa okumangalisayo kwamanzi
• Imizuzu eyi-10 WATERFRONT HAMBA ukuya enkabeni yedolobha, endaweni eyisicaba
• Indawo yokupaka ekhethiwe, engekho emgwaqeni yemoto eyodwa
• E-KINSALE --- “Gateway to the Wild Atlantic Way”, ngaphakathi kwebanga elifushane lokushayela ezindaweni eziningi ezaziwa kakhulu zase-Ireland
• Ilungiswe ngokuphelele nge-decor yesimanje kanye nezinsiza
• Ilungele izithandani ezihamba ndawonye
• Ukungabhemi endlini/Akunazilwane ezifuywayo
• Zihlole wena ngokwakho
• Iwasha/isomisi esinosayizi ogcwele esinezinto ezibalulekile zokuwasha ezinikeziwe
• Vula ipulani ekhishini/igumbi lokuhlala/ lokudlela
• Ikhishi elihlonyiswe ngokugcwele. Ukupheka/ukubhaka okubalulekile kanye nama-condiments kuhlinzekiwe.
• Ukundiza kwezitebhisi ukuze ungene emakamelweni okulala/amagumbi okugeza
• 65” I-TV ye-LED nebha yomsindo enikwe amandla ye-Bluetooth
• I-WiFi enhle kakhulu
• Ukufinyelela kwe-Netflix ne-Amazon Prime Video
• Kunikezwe izindlu zokugezela ezikhethwe kahle kakhulu --- ishampoo, i-conditioner, ukugeza umzimba, nokomisa izinwele kuhlinzekwe.
• Amakamelo okulala athokomele anamalineni amahle, izinhlobonhlobo zezingubo zokulala namaduvethi afakwe nemishini “yomsindo omhlophe” yabalala kalula
• UMTSHI WE-CARBON MONOXIDE AKUDINGEKI NJENGOBA UKUSHISA KUNGU-ELECTRIC.
• Itholakala kalula, njengoba umgwaqo u-R600 useduze nomnyango wakho, uphakathi kwendlu encane namanzi. Umsindo omncane womgwaqo ikakhulukazi phakathi namahora asemini, njengoba lena indlela engenela phakathi kwezindawo ezingaphandle neKinsale.
I-Kinsale iyiSango eliya e-Wild Atlantic Way --- umzila wezokuvakasha ongamakhilomitha angu-2500 ukusuka entshonalanga ye-Ireland ukusuka eNingizimu ukuya eNyakatho (noma i-visa versa). Ngakho-ke, kwenza indawo enhle ukuqala noma ukuqeda uhambo lwakho.
Endaweni uzothola izinto eziningi ezikhangayo -
• I-Kinsale Walking Tour ukuze uthole umbono womlando
• uhambo lwe-Ghost oluhlekisayo olusuka eTap Tavern
• i-scenic harbor cruise (ngesizini)
• ngasemanzini uScilly hamba uye eCharles Fort
• I-James Fort kanye ne-Dock Beach ngaphesheya kwamanzi ukusuka endlini encane
• 9/11 Ingadi Yesikhumbuzo
• Ukuvakasha kwe-Black's Brewery kanye ne-Distillery noma i-Kinsale Mead Tour
• Ukuze uthole imibono emangalisayo kanye nombono omuhle kakhulu womlando wendawo, i-Lusitania kanye ne-Old Head Signal Tower Museum.
• Uma ungumdlali wegalofu ozimisele ....AWUKWAZI ukuphuthelwa ukudlala igalofu iNhloko Yakudala yase-Kinsale, enye yezifundo eziphambili zase-Ireland (kudingeka izikhathi ze-advance tee).
• I-surfing/Wind-surfing e-Garrettstown Beach
Phakathi nemizuzu engama-30 - 45 isikhathi sokushayela:
• Idolobha laseCork
• Inqaba yaseBlarney
• I-Cobh Heritage Centre
• I-Titanic Experience ne-Titanic Trail Walking Tour
• I-Clonakilty kanye ne-Michael Collins House & Museum
• I-Mizen Head, ingxenye eseningizimu-ntshonalanga ye-Ireland (ukubukwa OKUMANGALISAYO...gqoka izicathulo zokuhamba ezinhle, futhi ulindele ukukhuphuka ngezitebhisi)
• I-Gougane Barra - ikhaya le-St. Finbar's Oratory kanye nepaki yehlathi kazwelonke
• idolobhana lasolwandle lase-Baltimore kanye nezikebhe eziwela e-Sherkin Island nase-Cape Clear
• Lough Hyne - Ukuze uthole okuhlangenwe nakho ongenakulibaleka, zama i-kayaking ebusuku lapha nge-Atlantic Sea Kayaking kolunye lohambo lwabo lwe-Moonlight Starlight.
Ibungazwe ngu-Con And Mary Ann
Izivakashi zizonikezwa imininingwane yokuxhumana nosokhaya wethu, u-Shirley, ohlala endaweni, nganoma imiphi imibuzo esheshayo noma izinkathazo. Sicela uzizwe ukhululekile ukusithinta nganoma yisiphi isikhathi. Nokho, njengoba sizobe siseChicago, kunomehluko wesikhathi samahora angu-6, okungenzeka ukuthi uthinta isikhathi sethu sokuphendula.
Izivakashi zizonikezwa imininingwane yokuxhumana nosokhaya wethu, u-Shirley, ohlala endaweni, nganoma imiphi imibuzo esheshayo noma izinkathazo. Sicela uzizwe ukhululekile ukusithi…
UCon And Mary Ann Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Kinsale namaphethelo